Shiinaha Habka afar geesoodka ah ee loogu talaggalay warshadaha Warehouse Automatic Racking Systems iyo saarayaasha | EBIL
Habka afar geesoodka ee loogu talagaley Nidaamka Raadiyaha Automatic ee Tooska ah
Habka waddo goynta afarta ah
Cabbirka xawaaraha afar waddo:
Qaabka Dayactirka / Muuqaalka Maxalliga ah / Muuqaalka tooska ah
Dalbashada Xaaladda —— Maktabadda dhinaceeda ah ee aqoon-isweydaarsiga warshadaha ee caqliga leh.
—— Bakhaarada cuntada lagu kariyey / cusub
——Cogyada xarunta ku meel gaarka ah.
—— Bakhaar madoow oo caan ah.
Nidaamka Xiritaanka Afar-geeska ah uu si buuxda u soo saaray EBILMETAL. Waa qalab gacanta ku haya Bakhaarada tikniyoolajiyada sare ah kaasoo shaqeysa adigoo ku safraya afar-jiho, beddelaad waddo oo kuyaal, si toos ah u maareeya, si caqli leh ula socoshada iyo dhaqdhaqaaqa taraafikada
Faa'iidooyinka: 1. Maalgashi la yareeyay iyo helitaanka meela lagu keydiyo
2. Ku safro afar jiho oo aad gaarto meel kasta oo bakhaarka ku yaal.
3. Korjoogteynta korantada iyo ku soo dallajinta tooska ah (kontaroolka marinnada badan);
1. Gawaarida afarta-gees waa aalad maarayn caqli leh oo awood u leh safarka toosan iyo safka horeba.
2. Gawaarida afarta-geesoodka ah waa mid aad u dabacsan, oo si xor ah u beddeli karto hawlgalka qalliinka. Intaas waxaa sii dheer, waa macquul in la isku hagaajiyo
Awoodda nidaamka iyadoo lagu darayo ama yareynaysa tirada xirmooyinka. Markii loo baahdo, diyaarado qafiif ah ayaa la abuuri karaa si ay uga jawaabaan Rabbiga
Nidaamka ugu sarreeya, markaa xallinta isbadalada ugu hooseeya ee gelitaanka iyo ka bixitaanka hawlgallada.
3. Xirmooyinka afarta-geesood waa la isweydaari karaa. Markii gaari ama wiish uu xumaado, xirmooyin kale ama wiishash kale ayaa loo diri karaa
nidaamka diraya si loo dhammaystiro hawlgalka iyada oo aan la taabanaynin awoodda nidaamka.
4. Gawaarida afarta-geesoodka ah kuma haboona keliya kaydinta-socodka hooseeya iyo cufnaanta sare, laakiin sidoo kale waxay ku habboon tahay socodka-sare iyo
kaydinta cufnaanta sare. Waxay sare u qaadi kartaa hufnaanta, qiimaha iyo adeegsiga kheyraadka.
Hore: Pallet Runner ee nidaamka rakibaada raadiyeyaasha raadiyeyaasha bakhaarka
Xiga: Kala Wareejinta Kala-Wareejinta Korantada Korantada Korantada Gawaarida Weelka Furaashka ee Meelanine Cantilever Shelf Metal
Wadada Shanaad , Xidhitaanka lakabyo Badan , Qalabka Birta , Suuqa Suuqa , Xarig , Asal aamisan ,